भट्टको निधन: को हुन् उनी? - समय-समाचार
भट्टको निधन: को हुन् उनी?
समय-समाचार सोमबार, २०७८ भदौ १४ गते, ११:०८ मा प्रकाशित
वरिष्ठ प्रगतिवादी साहित्यकार आनन्ददेव भट्टको ८६ वर्षका उमेरमा ‘अल्जाइमर रोग’बाट निधन भएको छ । गत महिना अस्तपालमा उपचारपछि निवास कालिकास्थनमा बस्दै आउनुभएका उहाँको आज बिहान निधन भएको हो ।
लामो समय नेपाली साहित्य, प्राध्यापन र प्रगतिशील चिन्तनमा सक्रिय उहाँका काव्य, खण्डकाव्य, संस्मरण, समालोचना र निबन्धलागयतका विधाका साढे दुई दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन् । उहाँका विशेषगरी ‘साइँलीमैया’, ‘आमा बोलाउँछिन्,’ ‘९७ साल’ लागायत कृति लोकप्रिय छन् ।
विसं १९९३ मा जुम्लामा जन्मनुभएका भएका उहाँ प्रगतिशील लेखक सङ्घ र प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत हुनुहुन्थ्यो । उहाँको शव श्रद्धाञ्जलिका लागि पशुपति आर्यघाटमा राखिने र अन्त्येष्टि गरिने प्रगतिशील लेखक सङ्घका अध्यक्ष प्रा डा जीवेन्द्रदेव गिरीले जानकारी दिनुभयो । भट्टका श्रीमती र दुई छोरा छन् ।
पोलेको, भुटेको मासु
कीर्तिमानी पर्वतारोही पुर्जा तेस्रो पटक धौलागिरिमा
विदेशमा ऋण लिनेले नेपाली बैंकको ग्यारेन्टी पाउने
उपन्यास मोचनको बिमोचन
प्राधिकरणको नयाँ महसुलप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया: झुपडीमा बस्नेले पनि सहज बिजुली…